Kungani ulwandle lubalulekile? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ulwandle, ikhaya lezilwane eziningi nezidalwa zezitshalo. Akuvamile ukuthi siyeke ukucabanga ngethonya elinalo esimweni sezulu, ngemuva kokuthi zonke izimpilo zethu zisemhlabeni. Kodwa-ke, iplanethi yethu imbozwe ngamanzi angama-70%; okungukuthi, usuku lwethu losuku lugxile kuma-30% kuphela. Ngaphezu kwalokho, izilwandle ziqukethe cishe wonke amanzi eMhlabeni: cishe 97%. Ama-3% asele atholakala eziPoleni.
Kulokhu okukhethekile esizokuthola kungani ulwandle lubalulekile ukuqonda isimo sezulu, nokuthi ukufudumala kwembulunga yonke kungasiguqula kanjani.
1 Ukubaluleka kwezilwandle
2 Kwenzekani uma ulwandle lushisa kakhulu?
3 Ithonya Oceanic on sezulu
Izilwandle ziyizilawuli ezishisayo, zimunca isikhutha. Njengoba zimboza cishe yonke iplanethi, inani elikhulu le-CO2 limunwa ngamanzi alo. Ebusuku bakhipha ukushisa abakubambe emini, lapho kunelanga; kodwa hhayi lokho kuphela, kodwa thumela njalo umusi wamanzi emkhathini, ngaleyo ndlela bakha amafu. Ngenxa yalo mjikelezo wokumunca nokukhipha, izinga lokushisa kweplanethi lihlala lizinzile kancane.
Kepha akugcini ngokuthonya ukushisa komoya kuphela, kepha futhi kulowo womhlaba kuze kufike ephuzwini, yize kukude nolwandle, ngenxa yemisinga yolwandle ehlukile. Eziningana ziyaziwa emhlabeni, njengeGulf Stream noma i-Antarctic Circumpolar Current. Badlala indima ebaluleke kakhulu ekulawuleni isimo sezulu nasemjikelezweni wezakhamzimba emanzini. Ngale ndlela, zonke izilwane ezihlala olwandle zinokudla ezikudingayo ukuze zisinde, kusuka ku-krill kuya kushaka omhlophe.
Imisinga ye-Ocean ingaba kubanda, ezivela ezindaweni ezibandayo nezipholile, noma kufudumele, okuyilawo aqhamuka ezindaweni ezishisayo aya ezindaweni eziphakeme. Lapho kuhlanganiswa okuningana, kwakheka okubizwa ngokujika okuthi eNyakatho Nenkabazwe kuzoshintshana ngokwewashi, noma okuphambene nalokho eningizimu Nenkabazwe.
Kwenzekani uma ulwandle lushisa kakhulu?
Yilokhu esikufakazelayo njengamanje: izitshalo nezilwane eziningi ziqala ukufa, kanti ezinye ziyakwazi ukuzivumelanisa nezimo. Kepha bonke banezinkinga eziningi. I-algae ne-plankton zondla izilwane ezincane njenge-krill, kanti i-krill idliwa yizinhlanzi ezinkulu kakhulu njengemikhomo nezimpawu. Ngakho-ke, uchungechunge lokudla lusengozini enkulu, ingozi esivele ikhona, ngoba ezindaweni eziningi inani labantu be-krill lehliswe ngaphezulu kwe-80%. Izinhlobo zeKrill emanzini abandayo, eduze neqhwa lolwandle. Ngokwanda kwamazinga okushisa, kuncane futhi kuncane indawo efriziwe.
Ngakolunye uhlangothi, ama-coral yisilwane sasolwandle esizwela kakhulu ekushintsheni. Banobudlelwano bokufanelana nabanye ulwelwe, lapho bobabili bethola izinzuzo: ulwelwe, nge-photosynthesis, bathola ushukela abawabelana ne-coral, obanikeza ikhaya eliphephile. Kepha lapho amanzi eshisa kakhulu, ulwelwe alunakukwazi ukwenza le nqubo ebalulekile, ngakho-ke bagcina ngokufa, futhi amakhorali aba nebala, abe buthakathaka, futhi ekugcineni abune nawo.
Izilwandle zimunca kuze kube yikota ye-CO2 ekhishwa ngabantu, kepha kungenzeka ukuthi sikhokha inani eliphakeme. Izilwandle ziya ngokuya zanda i-asidi, futhi nokugcina ibhalansi entekenteke edingwa yizilwane nazo zonke izidalwa ezihlala kuyo, kufanele kube yi-alkaline. Izimbaza noma amakhorali ngokwawo angamabili nje angenakuphila olwandle olune-asidi.
Ithonya Oceanic on sezulu
Njengoba sishilo, ulwandle luthonya isimo sezulu, kungaba olwasogwini noma izinkulungwane zamakhilomitha ukusuka kulo. Ngenxa yalokho okwaziwa ngegama le- I-Thermohaline yamanje, eYurophu singajabulela isimo sezulu esimnandi. Ngaphandle kwakhe, besizophoqeleka ukuthi sigqoke izingubo ezifudumele zoboya phakathi nezinyanga zasebusika.
Lokhu kusakaza ukuhamba yonke iplanethi, ifudumeze ePacific nasolwandle i-Indian kuya e-Antarctic, ize icwile oLwandle lwaseNorway. Ngaleso sikhathi amanzi abandayo nosawoti ehlela ezinzulwini, lapho ezoya khona ezindaweni ezifudumele zoLwandlekazi lwaseNdiya nasePacific lapho ezophinde avele khona futhi aqedele umjikelezo.
Ingabe usawoti uyayithinta imifudlana?
Yebo kunjalo. Njengoba sazi, uma si-oda isiphuzo esithambile neqhwa, sihlala sintanta ngaphezulu; Ngakolunye uhlangothi, uma sifaka usawoti emanzini uzocwila ngokushesha. Izigxobo zenziwe ngamanzi ahlanzekile, kepha iqhwa lincane, Amanzi aseNyakatho ye-Atlantic azoba nosawoti omncane, futhi lokhu kungasho ukuthi eYurophu sizozwa ubusika obubanda kakhulu. Noma kunjalo, iziphuphutheki ze-NASA ziqapha eduze ukuqubuka kwemisinga yeqhwa nolwandle ukuzama ukuqonda kangcono lolu hlelo.
Kuze kube manje, sesithole kuphela u-5% wolwandle. Ngenxa yokushisa komhlaba, kuzoba nezinhlobo eziningi ezizophela ngaphandle kokuba sibabone nakanye, futhi nezinye eziningi, ezisebenza njengokudla, mhlawumbe azikwazi ukuzivumelanisa
Ulwandle kumele luvikelwe futhi lunakekelwe, ngenxa yalo sonke sincike.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Kungani ulwandle lubalulekile?